7 Bachelor na Bachelorette kacha mma na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Bachelor na Bachelorette kacha mma na Europe
Na-ahazi nzere bachelorette ma ọ bụ nzere bachelọ bụ n'ezie akụkụ kachasị mma nke ịbụ ezigbo nwoke ma ọ bụ nwanyị na-asọpụrụ nsọpụrụ. Kedu ihe nwere ike ịbụ ihe obi ụtọ karịa ijikọta ndị otu niile maka ajọ ihe ọjọọ na Europe? Karịsịa tupu ndị ọchụnta ego nọ n'ìgwè ahụ biri.
Europe bụ nnukwu ebe maka mmemme oriri na ọ partyụ partyụ. Anyị ejirila aka 7 nke ezigbo bachelọ na bachelorette kacha mma na Europe. Site na njem dị egwu ga-ada njem gaa oriri na ọ andụ nightụ abalị na ebe ị na-a barụ mmanya. Ya mere, are ga-emerịrị njem kacha egbu egbu maka nwanyị na-alụ nwanyị ọhụrụ.
1. Mmefu ego Hedonistic-Bachelorette nke Enyi na Enyi
Na nnukwu ụlọ ihe nkiri, Berlin bụ ebe dị egwu maka njem na bachelorette na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ na Europe.
A maara Berlin maka nnọkọ oriri na ọ itsụ itsụ ya na Oktoberfest ma zuru oke maka nke a ngwụcha izu ụka. Nwere ike ibido oriri na ọ gettingụ byụ site na ịnweta ụfọdụ eserese eserese nke ndị otu na nnukwu ụlọ ọrụ a ma ama East Side. mgbe, gaa n'ihu na njegharị ahaziri onwe gị ma ọ bụ nweta ihe nlere na go bar ho. Ọzọkwa, Berlin bụ ụlọ ụfọdụ nnukwu nza, ebe inwere ike ihichapuchazo ihe nile n’abali n’abali ogugu.
Togbọ okporo ígwè na Copenhagen ruo Berlin
2. Njem njem nke Bachelorette / Bachelor Ga Amsterdam
Arụmọrụ na-adọrọ adọrọ, Amsterdam bụ obodo mmehie na Europe na obere paradaịs. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem bachelorette na mmiri na Europe, mgbe ahụ Amsterdam bụ ọkacha mara. Ọwa ifuru, lọ ndị mara mma na cafị mara mma, biking ụzọ, na n’ezie ifuru ifuru na Mee. Ọrụ ebube ndị a niile ga-eme ka mmụọ nke nwanyị dị nwunye n'eluigwe nwee ọhụụ n'eluigwe nke asaa.
Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwụcha izu iji mezuo oge ikpeazụ nke nnwere onwe, mgbe ahụ Amsterdam zuru oke maka nnọkọ bachelor ọhịa. Bido na Musa Du Sexe ruo mpaghara ọkụ ọkụ, ma jiri mmanya aụọ ihe ọ andụ andụ na nri iberibe nri mechie. N'ihi ya, njem nke okokporo na-aga Amsterdam ga-enweghị mgbagha ga-abụ njem a na-agaghị echefu echefu.
3. Njem njem nke Bachelorette / Bachelor Iji Prague
Mụnyị nwanyị ga-ahụ ọmarịcha nlele obodo Prague anya, ije, na art. Na mgbakwunye, A maara Prague maka ubi biya ya dị elu na ogige mmanya. Nke a pụtara na Ogwe Prague nọ n'ọnọdụ kachasị mma ma na-enye ọ drinksụ andụ kachasị ụtọ na nke aghụghọ na Europe, ọmụmaatụ, Ogwe mmanya mmanya Hemingway. Mgbe mmanya ole na ole gafere ma ọ bụrụ na ịchọrọ n'ezie abalị abalị, isi ịchọpụta Prague ama ama ama na Prague ọnọdụ abalị. Iji gwọọ n'ụtụtụ ụtụtụ ahụ, lelee ebe kachasị kọfị na Prague, Mug Cafe. Ha ọpụrụiche bụ ọgaranya kọfị ọṅụṅụ na na-atọ ụtọ nri.
Otú ọ dị, oburu na ichoghi imebi uche gi n’ime abali achu aja, gawazie isi obodo. Prague bụ ebe imirikiti ikuku na nza ebe ị ga - enweta onwe gị mgbe ị gachara enchanted nnukwu ụlọ. Nke a ga - eme ka nwanyị a na - alụ nwanyị ọhụrụ dị ka nwanyị akụkọ ifo. Ihe ozo di uku ndi umu nwoke ahu gha naa n’anya.
4. Njem Gaa Budapest
Nchọpụta ụlọ dị egwu na osimiri Danube na-agafe, mee Budapest ebe dị ịtụnanya maka njem bachelorette na ala bachelo.
Rin andụ mmanya na oriri ọ cruụ cruụ na-asọda osimiri Danube, na-agafe obodo na ihe nlere di egwu, zuru oke maka oriri bachelorette na bachelo. Nhọrọ ọzọ dị mma bụ izu ụka izu ike na ụmụ agbọghọ. Budapest bụ nnukwu obodo maka nri njegharị, ebe ị nwere ike ịnwale mmanya mba sitere na Eger na Somlo ma detụ ụtọ nri ọdịnala ndị Hungary na oriri iji mee mmemme nke ndụ ikpeazụ.
Faust Wine Cellar bụ otu n'ime cellas kachasị ochie na Europe na ebe ị nwere ike kpoo ezigbo mmanya di nma ma nụrụ ụtọ anụ ehi na-egbu egbu na nri ndị ọzọ.
5. Bachelor / Bachelorette Ga Tirol
Maka njem dị egwu na adrenaline-na-akwalite njem okirikiri na Europe, mpaghara Tirol dị n'Austria bụ ebe kachasị mma. Will ga - eche na ịlaghachi na mmalite. Tingnọdụ ala gburugburu ọkụ, na mpụga ụlọ gị maka ị forụ mmanya na mmanya. Ọ bụrụ na ndị otu nọ maka ihe njem nke ịrị ugwu ugwu, rafting, na ọtụtụ ndị ọzọ eme ihe n'èzí, mgbe Mpaghara47, bụ nhọrọ nzuzu maka ngwụcha izu ụka na ụmụ oriri ọ bụla.
Tirol zuru oke maka njem bachelorette, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-eme egwuregwu ma na-achọ inwe ihe okike na otu kachasị mma ebe na Europe. Echiche ndị dị ebube na ikuku dị mma zuru oke maka njikọta na ịmepụta oge ndị kwesịrị ncheta n'ọhịa na ọdọ mmiri Tirol.
Munich na Innsbruck site Ọzụzụ
Salzburg na Innsbruck site Ọkọni
Oberstdorf ka Innsbruck by Train
Graz ka Innsbruck by Train
Echiche ndị na-akpali akpali, ugwu, ndagwurugwu, na mmiri iyi na ugwu Switzerland bụ ntọala zuru oke maka njem bachelorette na-arọ nrọ na Europe. Ndị Switzerland Alps bụ ma paradaịs na Disneyland maka ndị otu egwuregwu na-akpali akpali. Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ndị otu gị hụrụ ọrụ n'anya n'anya, ị nwere ike ịga ski ma ọ bụrụ na oge oyi. ma ọ bụ, n'akụkụ aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ọ bụ oge opupu ihe ubi ma ọ bụ nke oge ọkọchị, mgbe, ije, ma ọ bụ itu ure n'ime obodo mara mma bụ naanị ihe ole na ole ị ga-eme na mpaghara ihe ịtụnanya a.
Ọ bụ ezie na okokporo bachelorette na Switzerland Alps nwere ike ịbụ nke dị ọnụ karịa ka ngwụcha izu ụka ga-aga Berlin ma ọ bụ Prague, ọ nwekwara ike ịbụ ebe ị mepụtara ncheta nke na - adịte ndụ gị niile na nke ahụ enweghị atụ.
Basel to Tralaken Trains
Geneva na Zermatt site na insgbọ oloko
Bern na Zermatt nke Ndị ụgbọ oloko na-aga
Lucerne na Zermatt site na insgbọ oloko
7. Bachelor / Bachelorette To Aquitaine, France
Njem bachelorette na azumazu bu ezigbo ohere iji gaa njem, nwaa ihe ọhụụ ma mebie usoro ihe omume. Gini mere ị ga - eji mee ya ụdị ejiji ma gaa n'ụzọ niile wee gbasaa ebe niile? Glamping bụ nhọrọ dị ịtụnanya maka bachelo na-egbu mmụọ na njem bachelorette. Ogbe France bu ebe di egwu banyere ebe ulo anwu Mongolian mara nma igho ndi enyi gi nma..
Ọdọ mmiri dị n'èzí, mkpụrụ, nri ụtụtụ n'ihe ndina, igba egbe, na ịnya ụgbọ elu n’elu ugwu ndị mara mma bụ ihe gbasara enweghị nchekwa na njem njem bachelorette onye ọ bụla ga-echeta. Njem njem na bachelor bụ ụfọdụ n'ime oge kachasị mma na ndụ onye ọ bụla. N'ihi ya, ekwesịrị ime ya n'ọmarịcha ebe n'ụwa na Europe zuru oke maka nrọ nrọ ma ọ bụ bachelorette nke na-arọ nrọ ma ọ bụ nke bachelorette.
Ọ dị mfe ịzụ ụgbọ ala na Europe na site na Save A Train gaa ebe ọbụla na obodo ọ bụla 7 kacha mma ị ga-eji aga njem bachelor.
You chọrọ itinye mgbagha blọọgụ anyị “7 Best Bachelor Ma Bachelorette Trips Na Europe” na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-bachelor-bachelorette-trips-europe/ የሰማይ አካላት– (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, you will find our most popular train routes – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / ya / de ma ọ bụ / es na ndị ọzọ asụsụ.
okokporo bachelorandbachelorette bachelorette BachelorettetripEurope BachelortripEurope TravelAlps TravelPrague travelswitzerland TravelTirol